Soomaaliya maxay la tageysaa shir madaxeedka Midowga Afrika? | Xaysimo
Home War Soomaaliya maxay la tageysaa shir madaxeedka Midowga Afrika?
Dowladda Federaalka Soomaaliya ayaa shir madaxeedka 33-aad ee Midowga Addis Ababa ka furmay la tagtay arrimo badan oo quseeya nabadda, siyaasadda, dhaqaalaha iyo arrimaha bulshada.
“Soomaaliya arrimaha ugu weyn oo ay shirkan kaga hadleyso ka sokoow in xaaladdeeda la ogaado waxaa ka mid ah in dadka Soomaaliyeed noolashooda kor loo qaado, dalalkana lagu martiqaado iney Soomaaliya maalgashadaan, in loo sheego Soomaaliya in deyn cafiski u soo dhaw yahay waddamada qaarna la weydiisto iney garab istaagaan iyada oo waddamada qaar ee horay Soomaaliya u soo garab istaagayna looga mahadceliyo. Norway oo kale iney Soomaaliya ka kaalmeyso Amniga iyo la dagaallanka aragagixisada ayaa ka mid ah waxyaabaha lagala hadlay.” ayuu yiri Wasiir Cawad.
“Madaxweynaha Uganda, Ra’isal wasaaraha Itoobiya, madaxweynaha Nigeria iyo Madaxweynaha Ruwaanda madax ay ka mid yihiin oo shir madaxeedkan ka soo qayb galay ayaa u qorsheysan madaxweyne Farmaajo inuu kulammo gaar gaar ah uu la yeesho” ayuu yiri Wasiirka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ee Federaalka Soomaaliya Soomaaliya, Axmed Ciise Cawad oo BBC u warramay.
Halku dhigga shir madaxeedka
Halku dhigga shir madaxeedka Midowga Afrika ee sanadkan